छोटकरीमा : आज - २०७७ मंसिर १५, सोमबार
आज कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरणको तयारी, दक्षिण सुडानमा हुन लागेकाे जातीय हिंसालाई नेपाली सेनाले रोक्यो, 'एमडी, एमएस प्रवेश परीक्षाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा', पशुपतिनाथ पुसदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने, 'श्रीलङ्काको जेलमा कोभिड-१९ को कारण दंगा, आठ जनाको मृत्यु' लगायतका विषयवस्तुहरूलाई सामावेश गरिएका छन्।
सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ । कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गरेको हो ।
कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरणको तयारी
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौंमै सोमबार बृहत प्रदर्शन भएको छ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै उनीहरुले जुलुस निकालेका हुन् । उनीहरुले लगाएको नारा र बोकेको प्लेकार्डमा मुख्यगरी ‘गणतन्त्र र संघीयता’ खारेजीको माग गरिएको थियो । ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ’, ‘राजा आउ देश बचाउ’, ‘गणतन्त्र धोका हो’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
राजावादीको निसाना : राष्ट्रपति, संघीयता र संविधान
विशेषज्ञ अध्ययनरत ‘रेजिडेन्ट डाक्टर’ अभाव हुँदा ठूला शिक्षण अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । एउटा समूह विशेषज्ञ अध्ययनपछि बाहिरिसकेको छ, पहिलो वर्षमा आउनुपर्ने नयाँ समूहले आठ महिनादेखि प्रवेश पाएको छैन ।
शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानमा खटिएका नेपाली सेनाले स्थानीयलाई सम्भावित जातीय हिंसाबाट जोगाएका छन् ।
अनमिसअन्तर्गत क्विवेट इलाकामा खटिएका कालिध्वज गणअन्तर्गतका सेनाले स्थानीयलाई सम्भावित जातीय हिंसाबाट जोगाएका हुन् ।
दक्षिण सुडानमा हुन लागेकाे जातीय हिंसालाई नेपाली सेनाले रोक्यो
सरकारले यसै महिना सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नेपाली सर्वेक्षण टोलीले गरेको अध्ययनले समुद्र सतहबाट सगरमाथाको शिखर ८,८४९ मिटरभन्दा बढी रहेको पाइएको बताइएको छ।
दुई साताअघि थपिएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा डिआइजी विश्वराज पोखरेलको बढुवा सिफारिस भएको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले उनको नाम सिफारिस गरेको हो ।
पशुपतिनाथ पुसदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने
देशभर आईसीयूमा ३७५ र भेन्टिलटेरमा ५८ जना गरी ४३३ जना कोरोना संक्रमित उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । आईसीयूमा प्रदेश १ मा ३२, प्रदेश २ मा ४, वाग्मती प्रदेशमा १५९, गण्डकी प्रदेशमा ९४, लुम्बिनी प्रदेशमा ७२ , कर्णाली प्रदेशमा ९ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५ जना उपचाररत छन् ।
देशभर ४३३ कोरोना संक्रमित आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचाररत
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ– भदौ २६ गते कै निर्णयमा फर्कौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफी प्रतिवेदनमा यो कुरा महत्त्वका साथ उठाएका छन् । ७९ दिने लामो विवाद र विग्रहलाई थान्को लगाउँदै भदौ २६ स्थायी कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिसगर्दा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नपछ्याएपछि अहिलेको विग्रह चर्किएको हो ।
भदौ २६ मै फर्कौं : केपी ओली सच्चिन तयार हो ?
हरेक वर्ष कात्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने शिख धर्मका प्रवर्तक गुरुनानकको जन्मजयन्ती विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। सोमबार गुरुनानक जयन्तीका अवसरमा कुपोन्डोलको गुरुनानक गुरुद्वारामा ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’ पाठ गराउनुका साथै साधुसन्तलाई भण्डारा गराइएको थियो ।
गुरुनानकको जन्मजयन्ती यसरी मनाइयो (फोटो फिचर)
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा अहिलेसम्मकै अत्यधिक गर्मी महसुस गरिएको छ । मौसम विभागका अनुसार तापक्रमको तथ्यांक राख्न सुरु भएदेखि नै रातको समयमा हालसम्मकै अत्यधिक गर्मी मापन भएको हो ।
सिड्नीमा अहिलेसम्मकै अत्यधिक गर्मी
श्रीलङ्काको राजधानीमा कोलोम्बोको बाहिरी इलाकामा रहेको एक कारागारमा भएको दङ्गामा परी आठ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
दङ्गामा मारिएका सवै व्यक्ति कैदी नै भएका सिन्हवा समाचार समितिद्वारा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ । दङ्गामा परी अन्य ४५ जना घाइते भएका छन् । घाइते भएकाहरुमा सुरक्षाकर्मी पनि रहेका छन् ।
जेलमा कोभिड–१९ को कारण दङ्गा, आठ जनाको मृत्यु
हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै एसिया, उत्तरपूर्वी अफ्रिका र युरोपमा दालचिनी, अदुवा, मरिच, बेसारलगायत मसलाहरुको ठूलो व्यापार चल्दै आएको छ । तर, विश्वव्यापी महामारीमा यो प्राचीन व्यवसायसमेत अन्त्यको नजिक पुग्न लागेको थियो । पूरै दुनियाँ लकडाउनमा रहँदा यी मरमसालाहरु उत्पादन गर्ने, जाँच गर्ने, ओसार्ने अनि प्रोसेस र प्याक गर्ने जस्ता जटिल नेटवर्कहरु सञ्चालनमा नआउँदा एउटा परम्परा नै गुम्ने जोखिम बढेको थियो । कोरोना फैलिरहेका बेला यसको खेती कसरी गर्ने ? कसले बिरुवाहरु प्रोसेस गर्ने र बिक्रीका लागि बाहिर केबाट कसरी पठाउने ? र, ती उत्पादनको सुरक्षा कसले जाँच गर्ने भनेर किसानहरु गम्भीर चिन्तामा थिए ।
कोभिडको समयमा विश्वमा यसरी जीवित रह्यो बेसारदेखि अलैँचीसम्म
बेलायतमा डिसेम्बर पहिलो साताभित्रै कोभिड खोप उपलब्ध हुने भएको छ । अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेका खोप ७ डिसेम्बरभित्र बेलायत आइपुग्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको कुकुरसँग खेल्ने क्रममा खुट्टा मर्किएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
बाइडेनका चिकित्सकका अनुसार बाइडेनको दायाँ खुट्टा मर्किएको र उनलाई केही हप्तासम्म सहयोगी आवश्यक पर्न सक्नेछ ।
छोटकरी सम्पादक 8 घण्टा पहिले
छोटकरी सम्पादक9घण्टा पहिले